प्रवास / विश्व Archives - Page2of 159 - TV Annapurna
Category: प्रवास / विश्व	महिलाहरु पुरपुरुषसँग सेक्स गर्न किन रुचाउँछन् त ? यस्तो रहेछ कारण
February 24, 2017February 24, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १३ फागुन, काठमाडौं । आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदै पनि परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने प्रचलन व्याप्त छ । महिला वा पुरुष आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसँग केही समय पछि नै दिक्क मानेर अर्कोलाई ताक्ने चलन बढिरहेको छ । खासगरी नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण यस्तो समस्या आउने गरेको छ । श्रीमान विदेशमा गएका बेला श्रीमती अर्को पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको घटना दिनप्रतिदिन बाहिर आईरहेका छन् । आखिर किन महिलाहरु अरुका श्रीमानलाई ताक्छन् अर्थात परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्छन् ? यसका विषयमा जापानमा एक संस्थाले अनौठो तथ्यको खुलासा गरेको छ । कण्डम निर्माता कम्पनी…
प्रवास / विश्वLeaveacomment	चीनमा सङ्क्रमक रोगबाट एक वर्षमा अठार हजारको मृत्यु
February 24, 2017February 24, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १३ फागुन, चीन । चीनमा सन् २०१६ मा संक्रमक रोगका कारण १८ हजार दुई सय ३७ जनाको ज्यान गएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार २०१६ मा करिब ६९ लाख चीनियाँमा विभिन्न संक्रमण देखिएको जनाएको छ । सो समयमा एक जनाको प्लेग (पेसिलेन्स) र २७ जनाको हैजाको उच्च जोखिमयुक्त ‘क’ वर्गको सङ्क्रमण भए पनि सबै जना उपचारपछि घर फर्किएको आयोगले बताएको छ। सन् २०१६ मा देखिएका करिब २९ लाख व्यक्तिमा ख वर्गको सङ्क्रमण भेटिएको थियो । जसका कारण १७ हजार ९६८ जनाको…
प्रवास / विश्वLeaveacomment	इराकको मोसुल विमानस्थल चार घण्टापछि सरकारी सेनाको नियन्त्रणमा
February 24, 2017February 24, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १३ फागुन, काठमाडौं । आईएसको कब्जामा रहेको मोसुल विमानस्थल इराकी सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । विमानस्थलमा चार घण्टाको आक्रमणपछि इराकी सेनाले पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । विमानस्थल नियन्त्रणमा लिएसँगै दोस्रो ठूलो शहर मोसुलबाट आइएसलाई भगाउन सेनालाई सहज हुने बताइएको छ । सेनाले आक्रमण गरेपछि विमानस्थलमा ठूलो भिडन्त भएको थियो । त्यस क्रममा आइएसका लडाकुहरुले भित्रि इलाकाबाट विमानस्थलतर्फ मोर्टार आक्रमण गरेका थिए । पूर्वी मोसुल भने सरकारी सेनाले गत महिना नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर यो विमानस्थल मोसुलको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्छ ।…
प्रवास / विश्वLeaveacomment	दक्षिण कोरियाको षड्यन्त्रमा लागेर किम नामको हत्या मलेसियाले गरेको उत्तर कोरियाको दाबी
February 23, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १२ फागुन, काठमाडौं । उत्तर कोरियाले क्वालालम्पुरमा भएको आफ्नो नागरिकको हत्यामा मलेसिया जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । हत्या गरिएका उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनका सौतेनी दाजु किम जोङ नामको नाम नलिइकन उत्तरले उनको शव फिर्ता गर्ने विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरेको जिकिर गरेको छ । ‘केसीएनए’ले कूटनीतिक पासपोर्टधारी आफ्ना नागरिकको ह्रदयघातका कारण मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ । उनलाई विष दलेको भन्ने रिपोर्ट झुटो भएको भन्दै केसीएनएले मलेसिया पनि दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरुले रचेको षड्यन्त्रको हिस्सेदार बनेको जनाएको छ । उत्तरको सरकारी सन्चारमाध्यम केसीएनएले नाम नलिइकनै पहिलोपटक…
प्रवास / विश्व, समाचारLeaveacomment	कोरियाली नाम हत्याको आरोपमा दूतावासको सचिवलाई पक्रने तयारी
February 23, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १२ फागुन, काठमाडौं । मलेसियाली प्रहरीले किम जोङ नामको हत्याको अनुसन्धानका क्रममा उत्तर कोरियाली दूतावासका सचिवलाई पक्रने तयारी गरि।हेको छ । क्‍वालालम्पुरमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मलेसियाली प्रहरी प्रमुख खालिद अबु बकरले तीन शंकास्पद उत्तर कोरियाली नागरिकको खोजी गरिरहेको जनाएका हुन् । तीन जनामा उत्तर कोरियाली दूतावासका द्वितीय सचिव हयोन क्वाङ सङ, उत्तर कोरियाली विमान कम्पनी कोर्‍योमा कार्यरत किम उक र री जी यू नामका व्यक्ति रहेको बताइएको छ । तिनीहरू अझै पनि मलेसियामै रहेको प्रहरीको आशंका छ । प्रहरी प्रमुख बकरले द्वितीय सचिव क्‍वाङ सङसहित अन्य उत्तर…
प्रवास / विश्व, समाचारLeaveacomment	संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्द्वारा निन्दा
February 23, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १२ फागुन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । फागुन–गत हप्ता इराकमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले निन्दा गरेको छ । बुधबार साँझ प्रकाशित परिषदद्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा उक्त जानकारी दिइएको छ । गत फेबु्रअरी १७ दक्षिणपश्चिमी इराकको व्यापारिक क्षेत्रमा भएको एक कारबम आक्रमणमा परी कम्तीमा ४५ व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य ५६ जना घाइते भएका थिए । उक्त आक्रमणको इस्लामिक स्टेट ९आइएस० समूहले जिम्मा लिएको थियो । सो परिषद्मा सदस्य राष्ट्रहरुले यस कारबम आक्रमणमा मारिएका व्यक्तिको परिवारजनलाई गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन् । इराकभरीमा गत जनवरी महिनामा भएक…
प्रवास / विश्व, समाचारLeaveacomment	विद्रोहीको एम्बुसमा परी काश्मीरमा चार जनाको मृत्यु
February 23, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १२ फागुन, भारत । भारत अधिनस्थ काश्मीरमा विद्रोहीको एम्बुसमा परी तीन जना सैनिकसहित चार जनाको बिहीबार मृत्यु भएको छ । एम्बुस आक्रमणमा मारिएका ती चारमा एक महिलाको पनि रहेकी छिन् । सुरक्षा कारबाहीको कार्य सकिएर फर्केर आउँदै गर्दा उक्त सैनिकको टोली विद्रोहीको एम्बुसमा परेका स्थानीय प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सुरुमा एबुम्समा परी छ सैनिक घाइते भएका र तीमध्ये तीन सैनिकको मृत्यु भएको जनाइएको छ । अर्की एक सर्वसाधारण महिलाको भने बाटो विराएर एम्बुस भएतिर गएकाले मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घटनामा परी घाइते भएका…
प्रवास / विश्व, समाचारLeaveacomment	भाजपा नेता विजय जोलीमाथि बलात्कारको आरोप
February 23, 2017February 23, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १२ फागुन, काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ । नेपालबारे राम्रो जानकारको रुपमा चिनिएका जोलीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको हो । दिल्लीकी एक महिलाले आफूलाई गुरगाउँको एक होटलमा जोलीले बलात्कार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छन्। उक्त महिलाले जोलीले गत फेब्रुअरी १० तारिखका दिन गुरगाउँको आप्नो घर रिसोर्टमा दिउँसो साढे एक बजेतिर आफूलाई बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् । जोलीले उनलाई ‘मिटिङ’ बस्ने भनेर होटलसम्म आफ्नो गाडीमा लगेको र पछि नसालु पेय पदार्थ खुवाएर जबरजस्ती गरेको महिलाले आरोप लगाएकी छन्। यस…
प्रवास / विश्वLeaveacomment	लागूऔषध ओसारपसार गरेको आरोपमा जापानमा दुई नेपाली पक्राउ
February 23, 2017February 23, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १२ फागुन, जापान/टोकियो । लागूऔषध ओसारपसारमा संग्लग्न रहेको आरोपमा जापानमा दुई नेपाली पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा २९ वर्षीय तापन तामाङ र पोखराकी २७ बर्षीया देवी गुरुङ दोङ रहेका छन् । उनीहरुलाई दुई महिना अघि नै पक्राउ गरेपनि जापानी प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन् । भोकेसनल स्कुल पढ्दै गरेका तामाङ र दोङलाई टोकियोस्थित उनीहरुकै निवासबाट प्रकाउ गरेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाउका छन् । उनीहरुले भारतको हवाई मार्ग हुँदै ठूलो मात्रामा गाँजा, भाङ, चरेससहितका नशालु लागुऔषध, बाद्यबादन सामाग्रीभित्र राखेर जापान भित्र्याएका थिए । उक्त सामाग्री तामाङ र गुरुङ बस्दै आएको…
प्रवास / विश्वLeaveacomment	भारत: ४ वर्षीया छोरीको हत्यापछि आमाले समेत गरिन आत्महत्या
February 23, 2017February 23, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १२ फागुन, काठमाडौं । एक महिलाले निकै मनछुने तरिकाले आत्महत्या गरेकी छिन् । भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर शहरमा साइटिका रोगले ग्रस्त २५ वर्षीया एक महिलाले निकै रोचक तरिकाले आत्महत्या गरेकी हुन् । महिला पहिले दुलही झैं सजिइन् । विवाह हुँदा लगाएको रातो साडी लगाइन् । चार वर्षीया छोरीलाई तयार गरिन् । त्यसपछि उनको घाँटी थिचेर त्यही सलले आफ्नो कम्मरमा बाँधिन् र आफूपनि सुलीमा चढिन् । घटना हुँदा महिलाका श्रीमान् अफिस गएका थिए । भारतको राउ थाना इलाकाको अशोका विहार कोलोनीमा बुधबार बेलुकी भएको उक्त घटनापछि अहिले चौतर्फी रुपमा…
प्रवास / विश्वLeaveacomment	Posts navigation